राजपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नु गोरुले भिर खोज्नु हो – शरत्सिंह भण्डारी – Sanghiya Online
काठमाडौं २१, माघ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरत्सिंह भण्डारीले प्रदेश नं. २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वका सरकार बन्ने बताएका छन् । पूूर्वसहमति अनुसार प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतले फोरम नेपालको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री बन्ने नेता भण्डारीले स्पष्ट गरेका हुन् ।
सन्डेखबरसँग कुरा गर्दै राजपा नेता भण्डारीले चुनावअघि दुई पार्टीबीच जसको बहुमत आउँछ उसैको दलबाट मुख्यमन्त्री चयन हुने र उसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सहमति भएको बताएका छन् ।
राजपाका केही नेताहरुले प्रदेश दुईमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहँदा राजपाकै शीर्ष नेता भण्डारीले त्यसको खण्डन गरेका हुन् । फोरम नेपालले मुख्यमन्त्री चयन नगरेको खण्डमा मात्रै स्वभाविक रुपमा आफूहरु सरकारको नेतृत्वको लागि अघि सर्ने नेता भण्डारीले बताए ।
आफूहरुको दाबी ‘प्रदेश नं. २ को लागि मधेश गठबन्धन बन्ने बेला मै फोरम नेपाल र राजपाबीच जसले बहुमत ल्याउँछ उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको थियो’, राजपा नेता भण्डारीले भने, ‘चुनावमा फोरम नेपालले बहुमत ल्याएकोले उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, यसका कसैले विवाद गर्न जरुरी नै छैन ।’
प्रदेश नं. २ मा फोरम नेपालले २९ वटा सीट ल्याएको छ भने राजपाले जम्मा २५ सीट प्राप्त गरेको छ ।
यता फोरम नेपालले मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रियालाई तीब्रता दिएको छ । जनकपुरमा शनिबार बसेको प्रदेशस्तरीय संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री चयनका लागि तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिसकेको छ । सम्भव भएसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसो हुन नसके निर्वाचन प्रक्रियामार्फत् मुख्यमन्त्री चयन गर्ने फोरम नेपालको तयारी छ ।